Candy Crush Soda Saga 1.143.6 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.143.6 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Candy ယခုအခမဲ့ Soda Saga နှိပ်စက်ခြင်း Download!
ဒဏ္ဍာရီ Candy Crush Saga ၏ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့် Candy Soda Saga နှိပ်စက်လာ! Unqiue သကြားလုံးပိုဘုရားသခငျ့ကိုက်ညီခြင်းပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ခရမ်းရောင်ဆော်ဒါနှင့်ပျော်စရာနှင့်အတူ brimming စိန်ခေါ်မှုဂိမ်း Modes သာ!
ဤသည်မှာပါးစပ်-ရေလောင်းပဟေဠိစွန့်စားမှုချက်ချင်းပျော်စရာအဘို့သင့်အငတ်ပြေပါလိမ့်မယ်။ မှော်ဂိမ်းအသစ်များအတိုင်းအတာအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်း switching နှင့်ကိုက်ညီသောအားဖြင့်, Tiffi တွေ့ရှိရန်သူမ၏အရည်ရွှမ်းခရီးအပေါ် Kimmy join ။ တစ်ဦးတည်းကဒီ Sodalicious Saga အပေါ်ကိုယူသို့မဟုတ်အမြင့်ဆုံးရမှတ်ရနိုင်သူကိုကြည့်ဖို့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဆော့ကစား!
ဇာတ်လမ်းတွဲအပိုင်းလူမျိုး၌သင်တို့၏ယှဉ်ပြိုင်ဘက်ပြရန်! အဆင့်ဆင့်အမြန်ဆုံးဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်အမြန်ဆုံးတိုးနိုင်သူကိုမြင်ရဖို့တခြားကစားသမားဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်ကစားသမား Sodalicious ဆုလာဘ်များအတွက်အတူတကွအလုပ်လုပ်ရှိရာလူမှုဘင်ဂိုကစားအင်္ဂါရပ်များတွင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်အလုပ်လုပ်!
သကြားလုံး Soda Saga အင်္ဂါရပ်များနှိပ်စက်ခြင်း:
🍭 3000 ကျော်ပွဲစဉ်3Sodalicious အဆင့်ဆင့်
soda - ထို Candy ဝက်ဝံကယ်ဖို့ခရမ်းရောင်ဆိုဒါလွှတ်ပေးရန်ဖို့ပုလင်းနှင့်ပွဲစဉ်သကြားလုံး Switch
Frosting - ရေခဲတပ်များနှင့်အခမဲ့ Candy ဝက်ဝံသတ်မှတ်ထားဖို့သကြားလုံးနှင့်ယှဉ်တွဲ
ပျားလပို့ - ပျားလပို့မှလာမယ့်ပွဲစဉ်သကြားလုံးဟာပိတ်မိနေ Candy ဝက်ဝံလွှတ်ပေးမည်
ယို - ဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖြတ်ပြီးယိုပျံ့နှံ့
🍭အားလုံးအသစ်ကသကြားလုံးနှင့် scrumptious သစ်ကိုတိုက်ဆိုင်သည့်ပေါင်းစပ်:
ပွဲစဉ်တစ်ဆွီဒင်ငါးစေရန်တစ်စတုရန်း4သကြားလုံး!
ပွဲစဉ်အားလုံးအသစ်ကအရောင် Candy7သကြားလုံး!
🍭 ပို. ပင်ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူအရည်ရွှမ်းသစ်ကိုကမ္ဘာနှင့်အဆင့်ဆင့် Explore!
🍭သစ်ကိုဂရပ်ဖစ်ပါးစပ်-ရေလောင်း, Candy Crush ပင် tastier ကြည့်!
🍭 Facebook က Connect ကိုသင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုစိန်ခေါ်နှင့်သင့် highscores နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောနေရာဦးဆောင်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်ဟုကစားသမား!
🍭အလွယ်တကူအင်တာနက်ချိတ်ဆက်အခါဂိမ်းများကိုအပြည့်အဝ features တွေသော့ဖွင့်ဖို့ devices များအကြားကစားပွဲစည်းညှိ
Candy Crush Soda Saga ကစားရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ထိုကဲ့သို့သောအပိုရွေ့လျားသို့မဟုတ်ဘဝတွေကိုအဖြစ်အချို့သော In-ဂိမ်းပစ္စည်းများငွေပေးချေမှုမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျပြီးသားသစ်ကို Candy Crush Soda Saga ၏ပရိတ်သတ်ဖြစ်ပါသလား ဒါကြောင့် အကယ်. Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းကို Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုကျနာ:
အနည်းဆုံးနောက်ဆုံးသော်လည်းမ, သင် Candy Soda Saga နှိပ်စက်ကစားခဲ့သူလူတိုင်းထွက်ဝင်တစ်ဦးကြီးတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Candy Crush Soda Saga အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Candy Crush Soda Saga အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Candy Crush Soda Saga အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
APK ဗားရွင္း 1.143.6
Release date: 2019-07-09 11:27:44